musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Yakachipa uye inodhura-shanu-nyeredzi kufamba maguta muUS
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Tsvagurudzo iyi yakaratidza maguta eUS anopa akanakisa mahotera mashanu-nyeredzi neDurham, NC, Arlington, TX neMinneapolis, MN inotora nzvimbo dzepamusoro.
Durham, North Carolina, ndiro guta risingadhuri reUS rekugara muhotera shanu-nyeredzi, inouya nemutengo wehusiku weUS $ 152.
Kunyangwe iri mumaguta gumi akachipa, Las Vegas '($ 284) wepakati mutengo waive uchiri mukuru kupfuura avhareji yeUS.
New York City yaive 21st guta rinodhura kwazvo muAmerica pamutengo wepakati we $ 395.
Yekufamba uye yekushanyirwa indasitiri nyanzvi vakaongorora maguta zana ane vanhu vakawanda muUS kuratidza kuti ndeapi anopa shanu-nyeredzi emhando yepamusoro pamutengo unodhura kwazvo. Tsvagiridzo yakaona kuti 100 maguta eUS akadhura pane avhareji yeUS $ 29.
Maguta eUS ane hotera dzisingadhuri shanu-nyeredzi:
chinzvimbo Guta renyika Avhareji yemutengo wekugara kwehusiku humwe % mutsauko weavhareji yeUS
1 Durham, North Carolina $152 -70%
4 Greensboro, North Carolina $200 -60%
Durham, North Carolina, ndiro guta risingadhuri reUS rekugara muhotera shanu-nyeredzi, inouya nemutengo wehusiku weUS $ 152. Kunyangwe uri mumaguta gumi akachipa, Las Vegas'($ 284) avhareji mutengo wanga uchakakura kupfuura avhareji yeUS ($ 503).
Maguta matanhatu chete aive akadhura pane avhareji yepasirese: Durham, Arlington, Minneapolis, Greensboro, Reno neMilwaukee.
New York City raive guta rechi21 rinodhura kwazvo muAmerica pamutengo wepakati we $ 395.